गोलभेडा नि’यमित रुपमा खाँदा यस्तो फाई’दै फाईदा ,थाहा पाउनको लागि पू’रा पढ्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
गोलभेडा नि’यमित रुपमा खाँदा यस्तो फाई’दै फाईदा ,थाहा पाउनको लागि पू’रा पढ्नुहोस!
एजेन्सी । नि’यमित गोलभेडा खाने व्यक्तिलाई मिर्गौला र पि’त्तथैलीमा हुनसक्ने प’त्थरीबाट जोगाउछ ।गोलभेडा खाँदा पाइने भिटामिन के को कारणले कपाल ब’लियो हुन्छ।
चमकदार, सिल्की र लामो हुनुका साथै कपाल झ’र्ने स’मस्यामा पनि कम गर्छ ।गोलभेडाको जुस खाँदा छाला चम्किलो हुन्छ । साथै छालाको कोषहरुलाई बि’ग्रनबाट जो’गाउछ ।गोलभेडामा हुने क्या’ल्सियम र ए’न्टी अ’क्सिडेन्टले ह’ड्डी ब’लियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
र’गतमा पाइने प्ले’टलेट्स को’षहरु एक ठाउमा जम्मा भएर न’शामा रगत जम्न गई र’गत प्र’वाहमा अ’वरोध उत्पन्न हुन सक्छ ।
गोलभेडा प्रशस्त मात्रामा पाइने फा’इटो न्यु’ट्रियन्ट्सले यस्तो सम्भावना कम गराउछ ।हरेक ८ मध्ये १ व्यक्तिलाई प्रो’ष्टेड क्या’न्सर हुने सम्भावना हुन्छ । गोलभेडा खाँदा पाइने अ’ल्फाटोमाटिनले प्रोष्’टेड क्या’न्सरकोष ब’ढन नदिने बनिसकेको क्या’न्सरकोषलाई भ’गाउनेकाम गर्छ ।
Previous भ्र’ष्टाचारविरुद्ध बोल्दा मु’खमा पानी हा’लेर बो’ल्दिनँ : प्रधानमन्त्री ओली,तपाईं के भन्नुहुन्छ?
Next प’तिको भा’ग्य च’म्काउनको लागि पत्निले हरेक दिन बि’हान गर्नै पर्ने कुराहरु यस्तो छन् ,जान्नुहोस।